အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်5CBD ထုတ်ကုန်များနှင့်၎င်း၏အသုံးဝင်သောအကျိုးကျေးဇူးများ
၁ ။ ပရီမီယံအနက်ရောင် CBD ကျခြင်း:
ဤရွေ့ကားလူကြိုက်များတဲ့ပရီမီယံအနက်ရောင်အဖြစ်လူသိများကြသည်အချို့သောအံ့သြဖွယ်လျှော်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည် CBD ကျဆင်းသွားသည်. ၎င်းတွင်သိုလှောင်မှုပမာဏ ၁၀ မီလီမီတာပါသော CBD ရာခိုင်နှုန်း ၆၊ ၁၂ နှင့် ၂၄ တို့ပါ ၀ င်သည်။ ဤပရီမီယံထုတ်ကုန်များသည်ကာဗွန်နိုက်၊ ကာယနစ်နိုဒိုင်ယိုအမျိုးမျိုးပါဝင်သောကာဗွန်နိုက်ထုတ်စက်မှရရှိသည်။
ဤရွေ့ကား CBD ထုတ်ကုန် အများအားဖြင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ terpenes ဟုလူသိများသည့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောလျှော်ထုတ်ယူမှုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းကိုသစ်သီးဝလံ terpenes များပါ ၀ င်သောလတ်ဆတ်သောအော်ဂဲနစ်လျှော်ပန်းပွင့်များနှင့်အတူပြင်ဆင်ထားပြီး ၁၀ မီလီမီတာသိုလှောင်သည့်အထုပ်တစ်ခုလည်းပါရှိသည်။
100ml သိုလှောင်မှုအိုးတစ်လုံးနှင့်အတူဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာဖြင့် CBD အုန်းသီး အဆိုပါ cannabidiol (CBD) နဲ့ထုံမွှန်းသည့်လိမ်းပြင်ဆင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဤအ balm များတွင် CBD ၏အာရုံစူးစိုက်မှု 0.5% မှ 3% အကြားအထိရောက်ရှိနှင့် supercritical CO2 ထုတ်ယူသုံးပြီး organically ထုတ်ယူ cannabidiol ကနေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
CBD balms ကယ်ဆယ်ရေးအဆစ်သို့မဟုတ်အဆစ်နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်နာကျင်မှုကူညီပေးသည်။ အရေပြားနှင့်ဆက်စပ်သောရောဂါများအတွက်ဤဆေးများသည်အလွန်ထိရောက်သည်။
၄။ CBD Elixir ပါးစပ်ဆေးခြင်း
ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်လူသိများသည် cnabidiol (CBD) မှပြုလုပ်သောအံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်ပါးစပ်ဆေးရည်များ CBD Elixir Mouthwash. ၎င်းတို့တွင်အဆိပ် (သို့) ဓာတ်သတ္တုများပါ ၀ င်သည့်လုံးဝအော်ဂဲနစ်ထုတ်ကုန်များပါဝင်သည့် ၂၅၀ မီလီမီတာအစုပါ ၀ င်သည်။
CBD Elixir Mouthwash သည်ပါးစပ်အခေါင်းပေါက်များကိုအေးဆေးငြိမ်သက်စေသည်၊ သွားဖုံးကိုသန်စွမ်းစေပြီးသွားများကိုကာကွယ်ပေးသည်။ CBD ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်အနီရောင်နှင့်ယားယံသော mucosa ကိုအကျိုးပြုသည်။ သံလွင်ရွက်၏တည်ရှိမှုသည်ရောင်ခြည်ကိုကာကွယ်ပေးသောအရာအဖြစ်တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာလုပ်ဆောင်ပေးသည်။
၅။ ဒေါက်တာ Kent အားကစားဂျယ်လ်
ဒီအံ့သြဖွယ်လျှော်ဖွဲ့စည်းမှုသည်အားကစားဂျယ်လ်နှင့်ဆီမွှေးများကိုအစားထိုးသည်။ ဒေါက်တာ Kent အားကစားဂျယ်လ် ငန်သီးထုတ်ယူမှု၊ menthol၊ ငရုတ်ကောင်းပူထွက်ပေါက်များ၊ လေးညှင်းပွင့်အခြေခံလိုအပ်သောဆီများနှင့်ဓာတ်သတ္တုထုတ်ယူမှုများစွာပါဝင်သည်။
သင်ဤထုတ်ကုန်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီးလုံးဝစုပ်ယူသည်အထိသင့်အသားအရေနှင့်အနှိပ်ခံလိုသည့်နေရာတွင်နေ့စဉ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်တစ် ဦး အားကစားလူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤ အားကစားဂျယ်လ် သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောသွားလာရင်းမှ option ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဤ entry ကို cbd-benefits, CBD news တွင်တင်ခဲ့သည်။ အမှတ်အသား ပြုထားသည် ။
CBD Balms အသုံးပြုခြင်း၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ။
သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအတွက် CBD ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုနှင့်အရေးကြီးမှု
CBD သတင်း (14)